Home / The Importance of Education in Your Career
ဒါပေမယ့် အများစု တွေးမိကြတာက Career လမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွက် “ပညာရေး” ဆိုတာ တကယ်ရော လိုအပ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့အတွေးပါ။ အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ တစ်ခုပေးရရင် ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကျ အလုပ်ခေါ်စာတွေရဲ့ Requirement ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပညာအရည်အချင်း ဘယ်လောက် Level ထိ ရှိရပါမယ် ဆိုတာမျိုး တွေ့ကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အများစု စဉ်းစားမိတာက ဒီ Position အတွက် Education Background က ဒီဘွဲ့ကြီးရထားမှ ဖြစ်မှာလား? ဒီ Career အတွက် Education Level က ဒီလောက်အတိုင်းအတာ တကယ်လိုအပ်လို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး မကြာခဏ တွေးတတ်ကြတာမျိုးပေါ့။
တနည်းအားဖြင့် ပြောရင် ကိုယ့် Career Pathway အတွက် ကိုယ်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရေး ဆိုတာက ဘယ်လောက်ထိအရေးပါပြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကို ဝေေ၀ဝါးဝါး ဖြစ်နေကြတာမျိုးတွေပေါ့။ တကယ်တမ်းကျ လက်တွေ့မှာ ကိုယ်က ဘယ် Career ကို လျှောက်လှမ်းချင်တာလဲ? ဘယ်လို လမ်းမျိုးကို ရွေးချယ်မှာလဲ? ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိ ရောက်အောင် သွားချင်တာလဲ ? ဘယ်လောက် အောင်မြင်ချင်တာလဲ? ဒါတွေ အားလုံးက ကိုယ့်ရဲ့ ပညာရေး အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် Educational Level ကိုအသားပေးတဲ့ Career မျိုးကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပညာရေးက အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိက နေရာက ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာပါ။ (ကိုယ့်အိပ်မက်က အဆိုတော်၊ အားကစားသမားစတဲ့ ပညာရေးကို အခြေခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင် အခြား Talent တစ်ခုခုကို အခြေခံပြီး ကြိုးစားရတဲ့ Career အတွက်ဆိုရင်တော့ ချွင်းချက်ပေါ့။) ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Career Pathway မှာ ပညာရေးကဏ္ဍက ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါနေပြီလဲ?
ပထမဆုံးနဲ့ အမြင်သာဆုံး အချက်ကတော့ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
We Are Hiring ဆိုတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာ အမြဲလိုလိုပါလေ့ရှိတာက Educational Level ပါ။ ဘယ် Position အတွက် ဘယ်လို ပညာရေးအဆင့်အတန်းတော့ ရှိရမယ်၊ ပြီးမြောက်ထားရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါတွေဟာ Additional အနေနဲ့ ထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Essential Requirement ဖြစ်နေလို့ပါ။ Position မြင့်လေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်းက မြင့်လေဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းဟာ အရေးပါသလို စာတွေ့သိရှိနေမှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ သီအိုရီပိုင်းတွေကို နားလည်သဘောပေါက်နေမှသာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ Effectiveness ရော Efficiency ပါအပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ်က ဒီ အလုပ်ကိုတော့ လုပ်ချင်ပါရဲ့ ဒီ ပညာရေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ မမှီဖူးဆိုရင် Interview ခေါ်မယ့် Candidate တွေထဲ ပါဖို့တောင် ခက်ခဲသွားမှာပါ။ Educational Level မြင့်လေ အလုပ်အကိုင်ရှာရတာ လွယ်လေ ရနိုင်ခြေ မြင့်လေ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။ ဒါက Career တစ်ခုကို စမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ ပညာရေးအပေါ်လိုက်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ကွဲပြားသွားလဲ ဆိုတာ စသိစေနိုင်မယ့် အချက်ပါပဲ။
ဒုတိယ အချက်ကတော့ Life Security ပါ။
ကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဟာ ဘဝ အာမခံချက်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုပါပဲ။ အလုပ်ကောင်းကောင်းမရမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ (အမှန်တကယ် တတ်မြောက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ပညာရေးမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။)
Unemployment rate တွေ မြင့်တက်တက်၊ နိမ့်ကျကျ ကိုယ် တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရေးက ကိုယ်ရောက်ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ Secure ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ နေနိုင်စေမှာပါ။
တတိယအချက်က Impression ပါ။
Educational Background ကောင်းတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ကိုယ့်တက်ရောက်ထားတဲ့ ကျောင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ Educational Background က စစ်မှန်မှုရှိပြီး လူသိပိုများလေလေ ကိုယ့်အတွက် Impression ကောင်းလေလေပါပဲ။ ဥပမာပြောရရင် ဒီ မေဂျာက လူတိုင်းက တော်ကြတယ်။ ဒီဘွဲ့ရတွေကတော့ ဘယ်အပိုင်းမှာ တကယ်ကို ထူးချွန်ကြတယ် စသည်ဖြင့် လူသိများပြီး အမှန်တကယ်လဲ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ထူးချွန်ကြသူတိုင်းအတွက် ကိုယ့် Educational Background ပေါ်မူတည်ပြီး လစ်လပ်နေတဲ့ ရာထူး တစ်နေရာက က သင့်အပိုင် ဖြစ်သွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များပါတယ်။ ( ကိုယ်က ထူးချွန်ခဲ့သူဆိုရင် သူဆို ကျောင်းက Recommendation Letter တောင်းပြီး Impression ကောင်းကောင်းနဲ့ အင်တာအဗျူးခံနိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။)
နောက်တချက်ကတော့ Job Flexibility ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်တဲ့အခါ Entry Level က တဆင့် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ Management Level ထိ အဆင့်ဆင့် တိုးတက် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Performance နဲ့ Experience တွေသာမက Educational Background ကလည်း လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်ရောက်ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်း ပညာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် သင်တန်းပြန်တက်ကြတယ်။ လိုအပ်တဲ့ skill တွေ ကို ပြန်လေ့လာကြတယ်ပေါ့။ နောက်ပြီး ပိုမို မြင့်မားတဲ့ နေရာတစ်ခုကို တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်၊ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး Level တစ်ခုကို လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အချို့အချို့သော လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက လူတွေက နေရာ အခြေအနေတစ်ခု အထိ ရောက်ရှိနေတာတောင် EMBA တို့ MBA တို့လို Master ဘွဲ့တွေ ထပ်မံ ယူနေကြတာမျိုးတွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပညာရေးအခြေအနေဟာ ကိုယ့် ရဲ့ Job Flexibility အတွက်သာမက Career Development အတွက်ပါ ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Skill Development ပါ။
ပညာသင်စဉ်အချိန်သာမက အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ကိုယ်တိုင် Development ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေရကြရတုန်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကွာခြားသွားတာက ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးကို ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတွေဟာ စာသင်ခန်းအတွင်းမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ Soft skills တွေ သင်ကြားလေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ Communication skill တွေ ရှိကြတယ်။ Creative ဖြစ်ကြတယ်။ Critical Thinking skill လည်း မြင့်မားကြပါတယ်။ ဒီလို အရည်အချင်းတွေက လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ရောက်တဲ့ အခါမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလို အရည်အချင်းတွေ တတ်မြောက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ လွယ်ကူနိုင်သလို လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်တဲ့အခါလဲ Skill Development ဖြစ်တာ ပိုမို မြန်ဆန်ကြပါတယ်။
ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် Maslow’s Hierarchy of Needs မှာပါဝင်တဲ့အတိုင်း Physiological Needs ကနေ Self-actualization အဆင့်အထိ ရောက်ဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ Educational Level ဟာ သူ့ရဲ့ Career Pathway မှာ အမှန်တကယ်ကို အရေးပါလှတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရေးကိုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို စနစ်တကျ သင်ယူလေ့လာ တတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ပညာနဲ့ လျှောက်လှမ်းရင်း အောင်မြင်မှုကို အရယူကြပါ။